WFWW:ပြည်သူလူထုရဲ့ အသက်အိုးအိမ်စည်းစိမ် ကို အကာအကွယ် မပေးနိုင်ရင် တာဝန်ရှိသူတွေ လူကြီးလူကောင်း ပီသစွာ နုတ်ထွက် သင့်ပါသလား? | San Oo Aung's Weblog
WFWW:ပြည်သူလူထုရဲ့ အသက်အိုးအိမ်စည်းစိမ် ကို အကာအကွယ် မပေးနိုင်ရင် တာဝန်ရှိသူတွေ လူကြီးလူကောင်း ပီသစွာ နုတ်ထွက် သင့်ပါသလား?
မိတ္ထီလာမြို့တွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သောပဋိပက္ခများကြောင့် စုစုပေါင်း ဒုက္ခသည်ဦးရေ ၉,၀၀၀ ခန့်ရှိနေရာ ခရိုင်အားကစားကွင်းရှိ ဒုက္ခသည်စခန်းအား ယနေ့မွန်းလွဲပိုင်းကတွေ့ရတဲ့ မြင်ကွင်းပါ။ ကမ္ဘာ့ရုပ်မြင်သံကြား သတင်းမီဒီယာတွေ မှာ လည်း ဖော်ပြနေကြတယ်။အင်မတန် မှ ကြေကွဲဝမ်းနည်းစရာ ကောင်းတဲ့ ဘာသာရေး အဓိကရုဏ်း အကြမ်းဖက်မှု အဖြစ်ဆိုးပါ။ ရ၀မ်ဒါ နိုင်ငံ မှာ ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ မင်းမဲ့ဆန်ဆန် အုပ်စုလိုက် လူမျိုးရေး အကြမ်းဖက် တိုက်ခိုက်မှု မျိုး ပုံစံ လို့ တောင် ကမ္ဘာမှာ ပြောဆိုနေကြပြီ။
« RFA:လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖေါက်မှုတွေကို မြန်မာအစိုးရ စုံစမ်းစစ်ဆေးဖို့ ကုလ တိုက်တွန်း Meikhtila Death Toll Reaches 32, Witnesses Say More than 50 Killed in Say than 50 Killed in Sectarian Violence »